घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » मदिरा र आत्माहरु » अधिक रक्सी पिउनुहोस्। विश्व अर्थव्यवस्था बढाउन मद्दत गर्नुहोस्
ब्रेकि International अन्तर्राष्ट्रिय समाचार • ब्रेकिंग यात्रा समाचार • पाक • संस्कृति • समाचार • पर्यटन • अहिले प्रचलनमा • संयुक्त राज्य अमेरिका ब्रेकिंग न्यूज • मदिरा र आत्माहरु
धेरै रक्सी पिउनुहोस्
वर्ष २०२० थियो, र म, अरुको बीचमा, ३२2020. billion बिलियन अमेरिकी डलर वाइनमा खर्च गरें। महामारी को लागी धन्यबाद, हामी वाइन पिउनेहरु अधिक वाइन पिएर सान्त्वना खोजिरहेका छौं, राजस्व को अनुमानित US $ 326.6 बिलियन सम्म 434.6 सम्म धकेल्दै, 2027-4.3 को बीच 2020 प्रतिशत को वृद्धि को प्रतिनिधित्व गर्दछ।
अमेरिका एक रक्सी को बजार को प्रतिनिधित्व गर्दछ $ 88 बिलियन (२०२०) अनुमान गरिएको छ जबकि चीन (संसारको दोस्रो ठूलो अर्थव्यवस्था) २०२२ सम्म .2020 ३.५ बिलियन अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ।
जापान र क्यानडा २०२०-२०२ between को बीच क्रमशः १.३ प्रतिशत र ३.१ प्रतिशत बृद्धि हुने अनुमान छ।
जर्मनी यस समय अवधि को दौरान लगभग २.२ प्रतिशत बृद्धि हुने सम्भावना छ।
मिठाई वाइन (यानी, Sauternes/फ्रान्स; Tokaji Aszú/हंगेरी; मस्कट/इटाली) संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, जापान, चीन र यूरोप मा एक बढ्दो श्रेणी हो र २.2.8 प्रतिशत बढ्ने आशा छ। यी क्षेत्रीय बजारहरु US $ 43 बिलियन (२०२०) को बजार आकार को प्रतिनिधित्व गर्दछन् र २०२2020 को अन्त्य सम्म US $ ५३ बिलियन (businesswire.com) सम्म बढ्ने सम्भावना छ।
जबकि केहि वाइनरीहरु महामारी को कारण बन्द गर्नु परेको थियो, लगभग एक तिहाई अघिल्लो बर्ष भन्दा राम्रो बिक्री गर्न सफल भयो। ठूला उत्पादकहरु जुटेर र आफ्नो कौशल सेट बोतलमा, अलमारियों मा, र उपभोक्ताहरु को हात मा शराब प्राप्त गर्न को लागी सुधारिएको छ।
बिक्री र वितरण चुनौतिहरु प्रशस्त थिए: प्रीमियम र लक्जरी उत्पादकहरु लाई अब रेस्टुरेन्ट र होटल डाइनिंग पोर्टलहरु थिएनन्, स्वाद कक्षहरु बन्द थिए, र ठूला उत्पादकहरु किराना र औषधि पसलहरु लाई पुनः निर्देशित गर्न को लागी उत्पादन मा छोटो थिए। पश्चिमी तटले क्यालिफोर्नियामा शुरू भएको आगो अनुभव गर्यो र दक्षिणी ओरेगन बाट फैलियो यी राज्यहरुमा हजारौं टन अंगूर नष्ट गरीयो।
नराम्रो समाचार राम्रो पारिवारिक वाइनरी रेकर्डि internet इन्टरनेट बिक्री संग बिक्री को १ प्रतिशत भन्दा कम कुल बिक्री को १० प्रतिशत भन्दा बढि संग राम्रो खबर संग सन्तुलित थियो। राम्रो ग्राहक सम्बन्ध संग वाइनरीहरु उत्पादन र फोन को बिक्री को लागी लगभग रातारात राजस्व को एक महत्वपूर्ण स्रोत बन्न डिजिटल भिडियो बिक्री संग धेरै व्यक्तिगत अनुभवहरु लाई प्रतिस्थापन को लागी एक कल प्राप्त गरीरहेको थियो।
चलिरहेको उद्योग-व्यापी मुद्दाहरु गायब भएनन्। रक्सी विरोधी आन्दोलन जारी छ, स्वास्थ्य दिमाग युवा उपभोक्ताहरु किनारामा बस्न जारी, र डिजिटल बिक्री मा लगानी को एक अनुपस्थिति ध्यान को आवश्यकता जारी राखीयो। त्यहाँ सुख्खा सामग्री को मूल्यहरु, बोर्ड भर मा आपूर्ति को कमी, गिलास को बोतलहरु, काठ का बक्से, बक्सहरु र प्यालेटहरु को लागी मूल्य र वितरण समय बृद्धि को लागी चिन्ताहरु छन्।
केहि आपूर्तिकर्ताहरु ग्राहकहरु लाई काठ बाट कार्डबोर्ड मा स्विच गर्न सोधिरहेका छन्; जे होस्, त्यहाँ कागज र गत्ता मा दबाब छ जब यो समय सीमा र मूल्य निर्धारण को लागी आउँछ। कतिपय अवस्थामा कच्चा पदार्थ ५० प्रतिशतले बढेको छ। ग्लास निर्माताहरु २०२० मा उत्पादन को गति ढिलो भयो, र उनीहरु कुनै पनी चाँडै एक मजबूत रिकभरी को आशा गर्दैनन्। कोविड को कारण बूमरहरु धेरै संख्या मा सेवानिवृत्त संगै, युवा पुरुषहरु र महिलाहरु लाई वाइन उपभोक्ता बन्न को लागी सूचीबद्ध गर्न को लागी महत्वपूर्ण भएको छ।
क्रिस्टल बल Gazing
त्यहाँ वाइन उद्योग को लागी एक उज्ज्वल भविष्य छ, तथापि, एक morphing बजार को वास्तविकता लाई सम्बोधन गर्नु पर्छ। २०२० बाट र अगाडी बढ्दै जाँदा, धेरै मानिसहरु घर बाट काम गरीरहेछन्, उपभोक्ताहरु उपनगरहरु मा स्थानान्तरण हुनेछन् र यी बढ्दो प्रवृत्तिहरु को मतलब हो कि अनलाइन खरिद उपभोक्ताहरुलाई अन्य अवस्थित च्यानलहरु बाट टाढा लैजाने छ। रेस्टुरेन्ट बिक्री फिर्ता आउनेछ किनकि प्रतिबन्धहरु कम कडा हुन्छन् स्थानीयहरु बाहिर भोजन को समर्थन संग; जे होस्, पर्यटकहरु को फिर्ता को लागी प्रतीक्षा धैर्य हुनेछ। रेस्टुरेन्टहरु सेवा को नयाँ डिजाइन गर्न को लागी सम्भव छ, पूर्ण सेवा बसेको मोडेल बाट नयाँ राजस्व सृजना गर्ने रणनीतिहरु लाई विशेष गरी होम डेलिभरी र कर्बसाइड टु-गो मोडेलहरुमा सार्दै; जे होस्, यी ढाँचाहरु अल्कोहल को बिक्री लाई प्रोत्साहित गर्दैन धेरै रेष्टुरेन्टहरु वाइन सूची कम र प्रस्ताव लाई सुव्यवस्थित गर्न को लागी परिणामस्वरूप।
साना स्वतन्त्र रेस्टुरेन्टहरु सबै भन्दा कठिन हिट थिए र उनीहरु साना परिवार वाइनरीहरु द्वारा उत्पादित शराब को लागी बिक्री को एक प्राथमिक बिन्दु भएको छ। विजेता रेस्टुरेन्टहरु ड्राइभ थ्रु, कर्बसाइड पिकअप र / वा एप आधारित अर्डर र होम डेलिभरी (जस्तै, पिज्जरिया, डेलिस, खाना ट्रक, फास्ट फूड र कफी पसल) थिए। सबैभन्दा ठूलो रेस्टुरेन्ट बन्द दर उच्च शहरी भाडा (क्यालिफोर्निया, नेभाडा, हवाई) र Yelp को अनुसार, रेस्टुरेन्ट बन्द हुने percent१ प्रतिशत स्थायी हुनेछन्। जे होस्, नयाँ पूँजी उद्यमीहरु बाट आउने सम्भावना छ जो स्टार्ट-अप शुरू गर्दछन् र, ४-५ बर्षको अवधिमा, बिस्तारै स्थायी रूप बाट बन्द सम्पत्तीहरु लाई धेरै प्रतिस्थापन गर्दछ।
त्यहाँ आशा छ कि शहरी सरकारहरु बाहिरी भोजन को लागी सडक बन्द/विस्तार को अनुमति जारी राख्नेछन् यद्यपि Mintel अनुसन्धान उल्लेख गरीयो (सेप्टेम्बर २०२०) कि लगभग percent० प्रतिशत डिनर बाहिर खाना असहज थियो। भित्री भोजन को प्रोत्साहित गर्न को लागी, रेस्टुरेन्टहरु पैसा को ठूलो मात्रा मा वायु शुद्धिकरण प्रणाली स्थापित गर्न खर्च गरीएको छ। के उन्नत निस्पंदन प्रणाली एक डाइनर एक गाल-द्वारा- jowl खाने अनुभव मा फिर्ता आउन को लागी प्रोत्साहित गर्दछ अझै निर्धारण गर्न बाँकी छ। अन्तरिम मा, उद्योग भोजन गर्न जाने, हिड्ने सेवा, र कर्बसाइड पिकअप मा केन्द्रित छ।
व्यापार यात्रीहरु प्रमुख शहरहरु मा होटलहरु, एयरलाइन्स र रेस्टुरेन्टहरु को लागी एक ठूलो नाफा केन्द्र भएको छ र यी क्षेत्रहरुमा वाइन बिक्री को संभावना यो बजार बिना वृद्धि देखीनेछ। अनुमानित २+ बर्ष रिकभरी अवधि मा, ब्यापारिक यात्राहरु छोटो र ठूलो उद्योग व्यापार घटनाहरु पछि आउने संगै सानो हुने सम्भावना छ।
सेवा को लागत
नीलसनका अनुसार, यसको मूल्य १२. औंस बियर बन्द सेवा को लागी १.०२ डलर, १.४५ औंस आत्मा को सेवा को लागी १.०1.02 डलर र ५ औंस वाइनको १.५१ डलर को लागी १.५१ डलर पर्छ। यसको मतलब शराब percent२ प्रतिशत सेवा गर्न को लागी अधिक महँगो छ र बताउँछ कि प्रति सेवा को लागी कम मूल्य आत्माहरु को सफलता को कहानी को एक स्पष्ट भाग हो। कम र/वा सानो ठीक भोजन र व्यस्त पट्टी विकल्पहरु, र takeaway मा एक वृद्धि संग, यो सम्भव छ कि अल्कोहल पेय सूचीहरु पनि तल र सरलीकृत गरिनेछ।
750५० मिलीलीटर बोतलहरु को बृद्धि दर ३५५ मिलीलीटर बोतल, टेट्रा प्याक, डिब्बा र ५०० मिलीलीटर बोतल सहित सानो प्याकेज आकार संगै घटेको छ। साना आकार लोकप्रियता पूर्व covid मा बढ्दै थियो र अगाडि जाँदै स्वीकृति लिन सक्छ।
यदि 750-मिलीलीटर बोतल कुनै लामो लोकप्रिय छैन-के बढ्दै छ? ठूला ढाँचाहरु-१.५ लिटर श्रेणी मा विशेष गरी २ वा ३ लीटर समूह जो ५०+ प्रतिशत को बृद्धि संग प्रीमियम थैली मा एक बक्स कब्जा गरीरहेको छ।
मूल्य प्ले प्याकेजि costs्ग लागत घटाउन मा ध्यान केन्द्रित छ। बुमर्स सेवानिवृत्त रूपमा, उनीहरु मितव्ययी उपभोक्ताहरु को रूप मा सहस्राब्दी मा सामेल हुनेछन् र उपभोग र खर्च परिवर्तन हुनेछन्; जे होस्, यो राम्रो रक्सी पिउन र एक कम गुणस्तरीय अनुभव को लागी स्विच गर्न को लागी मुश्किल छ ... यो प्रीमियम ३ लीटर प्याकेज हो कि यो आवश्यकता पूरा गर्दछ। युवा उपभोक्ताहरु जो कि मितव्ययी छन् ३ लीटर प्रीमियम बक्स एक राम्रो खरीद पाउन सक्छन् र एक युवा परिवार को लागी लंच र डिनर को लागी घरमा बस्न को लागी, प्रीमियम बक्स एक सही उत्तर हुन सक्छ।
Chardonnay सबैभन्दा लोकप्रिय varietal हुन जारी छ; जे होस्, यसको वृद्धि दर एक नकारात्मक २.2.7 गिरावट जारी छ; लगभग १० प्रतिशत - merlot सबैभन्दा खराब गिरावट देखाउँछ। खिल गुलाब बन्द शून्य भन्दा तल एक वृद्धि दर संग गुलाब छ।
रातो मिश्रणहरु २०२० मा गिरावट पछि २०२० मा एक कमब्याक गरे र ३.2020 प्रतिशत बृद्धि देखाइयो। मीठो, विशेषता वाइन प्रभावशाली बृद्धि विशेष गरी agave आधारित वाइन (किण्वित नीलो agave बाट बनेको वाइन; ब्ल्यान्को टकीला संग मिश्रण द्वारा दृढ) कि शराब/आत्माहरु को वर्गहरु लाई धमिलो बनाउँछ र टकीला र margaritas को लोकप्रियता लाई खेल्छ १०० प्रतिशतको वृद्धि देखाउँछ। Agave शराब tequila भन्दा अल्कोहल मा कम छ र एक स्वास्थ्य दिमाग उपभोक्ता लाई कम क्यालोरी को लागी देखी खेल्छ। उत्पादन पनि हिस्पैनिक उपभोक्ताहरु जो मेक्सिको मा बेचिएको छ जो उत्पादन को आदी छन् मा आकर्षित गर्दछ। लोकप्रियता मा जारी prosecco, sangria र sauvignon blanc छन्।
बेबी बूमर्स (अमेरिका मा डिस्पोजेबल आय को 70 प्रतिशत र धन को 50+ प्रतिशत) वाइन को सबै भन्दा ठूलो उपभोक्ताहरु जारी छ। हाल मात्र एक प्रतिशत बिन्दु जनरल एक्स (१ 1960 early० को प्रारम्भ देखि मध्य १ 1970 s० को दशक को अन्त सम्म १ 1980 s० को दशक को शुरुवात) बाट उनीहरुको उपभोगलाई अलग गर्दछ त्यसैले उनीहरुलाई प्रमुख समूह मान्न सकिदैन। Millennials (१ 1981 and१ र १ 1996 between को बीचमा जन्मिएको) अमेरिकी वाइन उद्योग को लागी सबैभन्दा ठूलो बृद्धिको अवसर हो जसले भर्खरै वाइन कोटि मा रुचि देखाउन थालेका छन्। यो समूह हो कि उद्योग को लागी क्रम मा वाइन को बारे मा उत्साहित हुन को लागी कुनै पनी वृद्धि दर १ 20 ४ देखि १ 1994 ४ सम्म २० बर्ष को अवधि मा अनुभव गर्न को लागी देखीन्छ।
Millennials प्रीमियम वाइन कोटि मा सक्रिय छैनन् यद्यपि उनीहरु लक्जरी सामान को खरीद मा ऊर्जावान छन्; यस समूहको लगभग २० प्रतिशत वाइन उपभोग गर्दछन् तर ३३ प्रतिशतले विलासिताका सामानहरु किन्छन्। अनुसन्धानले सुझाव दिन्छ कि सहस्राब्दी प्रीमियम वाइन खरिद क्षेत्र मा उफ्रन को लागी ढिलो गरीरहेको छ किनकि शिल्प बियर र आत्माहरु को लागी प्रारम्भिक प्राथमिकता, रक्सी को खपत संग जोडिएको स्वास्थ्य समस्याहरु को बारे मा प्रश्न र क्यारियर, परिवार र धन स्थापित गर्न मा ढिलाइ अघिल्लो पुस्ता को तुलना मा।
वाइन उद्योग ध्यान दिनुपर्छ कि युवा उपभोक्ताहरु उनीहरु लाई समर्थन गर्ने ब्रान्डहरु बाट अधिक चाहान्छन्। जबकि स्थिति खोज्ने boomers आफ्नो धन र सफलता को प्रदर्शन गर्न को लागी आवश्यक छ, सहस्राब्दी माटो, फसल मिति, पीएच, वाइनमेकर र एक शराब स्कोर को बारे मा सूचित गर्न रुचाउँछन्-त्यसैले उनीहरु साथी र सहकर्मीहरु को बीच मा जान्न को लागी जान्न को लागी एक "शो को रूप मा जान्छन्। बन्द। "
युवा बजार क्षेत्र कब्जा गर्न इच्छुक वाइनरीहरु सामाजिक न्याय, इक्विटी र विविधता, पानी रिसाइक्लि,, ग्लाइफोसेट को उपयोग बाट बच्न, LEED प्रमाणीकरण प्राप्त, बायोडायनामिक र जैविक खेती विधिहरु को उपयोग गरी आफ्नो मार्केटि activities गतिविधिहरु मा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। यस समयमा, यो जानकारी को लगभग कुनै बिक्री, सार्वजनिक सम्बन्ध वा मार्केटि campaigns अभियान वा वाइनरी वेबसाइटहरु मा देखा पर्दछ।
Terroir भन्दा धेरै
अर्को दशक मा, रक्सी उद्योग केहि नयाँ मा रूपान्तरण हुनेछ। त्यहाँ चिनियाँ उपभोक्ताहरु संग नयाँ वाइनरीहरु (जस्तै, सिल्वर हाइट्स दाखबारी/Ningxia हुई स्वायत्त क्षेत्र; ग्रेस दाखबारी/Shanxi Provence; Chateau Changyu AFIP ग्लोबल/Miyun जिल्ला, बेइजि)), र बढ्दो खपत सहित जारी रहनेछ।
जलवायु परिवर्तन र उत्पादकहरु, वाइनमेकरहरु र खुद्रा विक्रेताहरु द्वारा टेक्नोलोजी को अपनाउने तरीकाले हामी वाइन किन्ने र पिउने तरीका मा असर पार्नेछ। जलवायु परिवर्तन अक्षांश मा नयाँ वाइन क्षेत्रहरु सिर्जना गरीरहेछन् एक पटक वाइन बनाउन को लागी अनुपयुक्त मानिन्छ। स्वीडेन, नर्वे र नेदरल्याण्ड्स को कारण वार्मिंग प्रवृत्ति को विश्व स्तरीय मदिराहरु को विकास गर्न थालेका छन्।
एक टेक्नोलोजी परिप्रेक्ष्य बाट, ड्रोन र रोबोटहरु दाखबारी मा आफ्नो उपस्थिति वृद्धि हुनेछ। नयाँ टेक्नोलोजी जमिन मा सेन्सर संग बढ्दो प्रक्रिया मा सुधार ल्याई माटो व्यवस्थापन मा प्रगति को लागी र अंगूर किसानहरु लाई पानी दाखिला को लागी उत्तम समय निर्धारण गर्न को लागी मद्दत गरीरहेको छ। फ्लाइlying ड्रोन रोग र सूखा र रोबोट को संकेत को लागी जाँच गरीरहेका छन्, कैंची जस्तै हातहरु बोट काट्न को लागी दाखबारी घुमाउदै छन्।
अधिक र अधिक वाइनमेकरहरु वाइनरीहरु मा सौर्य ऊर्जा को उपयोग गरेर केहि र अन्य पर्यावरण टिकाऊ समाधान को लागी समग्र कार्बन पदचिह्न लाई कम गर्न को लागी खोज मा रसद आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन संग दिगो खेती विधिहरु शुरू गरीरहेका छन्।
वाइन पिउने को रूप मा वैश्वीकृत हुन्छ, उनीहरु appellation वा किण्वन वा अन्य विशेषताहरु कि एक शराब छुट्याउने बारे मा परवाह छैन। उनीहरु सजीलो सजीलो मदिरा कि राम्रो स्वाद को लागी खोजिरहेका छन्। धेरै मामिलाहरुमा, वाइन ब्रान्डहरु परम्परागत सुपरमार्केट ब्रान्डहरु जस्तै बनिरहेका छन् र यसको मतलब वाइन लेबल अधिक रमाईलो, अभिनव र महत्वपूर्ण हुन जाँदैछ।
वाइन नक्कली को समस्या लाई सम्बोधन गर्न को लागी, टेक्नोलोजी एक blockchain आधारित प्रमाणीकरण र विश्वास प्रणाली सिर्जना गरीरहेको छ। ब्लकचेन टेक्नोलोजी एक विकेन्द्रीकृत, वितरित लेजर हो कि एक डिजिटल सम्पत्ति को स्थायी र अनुपलब्ध को प्रमाण रेकर्ड, यो ठीक वाइन को एक विशेष रूप देखि दुर्लभ बोतल (यानी, चाई वाइन भोल्ट) प्रमाणित गर्न को लागी एक तरीका को रूप मा सही बनाउँछ।
"या त मलाई धेरै रक्सी दिनुहोस् वा मलाई एक्लै छोड्नुहोस्।" - रुमी